Mogadishu Journal » Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Madaxa-banaan oo lagu xirey Dhuusa-mareeb
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Madaxa-banaan oo lagu xirey Dhuusa-mareeb
Mjournal :-Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Madaxabanaan Marwo Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu xirey magaalada Dhuusamareeb kadib markii safar dhulka ah ku tegey magaaladaas.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Xaliimo Yarey guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan ay ciidamo daacad u ah maamulka Ahlu Sunna ee ka taliya magaalada Dhuusamareeb iyo ilaaladeeda ay isku khilaafeen baaritaan la doonayay in lagu sameeyo Guddoomiyaha Doorashada Madaxabanaan.
Hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in aan la xirin Xaliimo Yarey balse ay ciidamada maamulka ay xabsiga dhigeen qaar kamid ah ilaaladeeda.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug oo ku saabsan xarigan la sheegay in loo geystey Guddoomiyaha Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Madaxabanaan Marwo Xaliimo Ismaaciil.
Marwo Xaliimo Yarey ayaa shalay gaartay magaalada Guriceel halkaa oo ay kulamo kula yeelatay maamulka degmadaas iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ku nool degmadaas,waxayna gelinkii dambe ee maanta safar dhulka ah ku tagtay magaalada Dhuusamareeb.
Milatariga Soomaaliya” Jawaab cad ayaa ka bixin doonaa Sarkaalkii ay Kenya nooga dishay Ceel-waaq”